Gabdhaha da' yarta ah oo walwalku ku badanyahay - BBC Somali
Gabdhaha da' yarta ah oo walwalku ku badanyahay
6 Juunyo 2016
Image caption Gabdha da' yarta ah ayaa u badan walwalka
Cilmi baarayaal ka socda jaamacadda Cambridge ayaa sheegay in baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in dumarka da'doodu ay ka yartahay 35 sano uu ku badan yahay walwalka.
Dumarkan ayaa la sheegay inay qabaan cabsi iyo degenaan la'aan
Cilmi baarayaasha ayaa sheegay in loo baahan yahay in walaaca si weyn looga taxadaro, maadaama uu sare u qaadi karo khatarta ay dadka ugu jiraan in ay id dilaan, isla markaasna uu xiriir la leeyahay kharash badan oo bulshada ka baxa.
Khubarada ayaa ogaatay in dad ka badan 60 milyan oo qof uu sanad walba walwalka ku saameeyo waddamada Yurub oo keliya.
Waqooyiga Ameerika ayaa ah halka ugu ba'an ee uu walwalka saameeyay, waxaana boqolkiiba 8 dadka dhulkaasi ku nool ay qabaan walwal.
Olivia Remes oo ka mid ah cilmi baarayaashaasi, isla markaana ka tirsan waaxdaa caafimaadka dadweynaha ee Jaamacadda Cambridge, ayaa ku sheegtay sababta ay dumurka ugu badan yihiin walwalka in ay tahay maadaama ay u nugul yihiin cadaadiska, isla markaasna ay yihiin kuwa daryeela caruurta.